Izindaba Nezibuyekezo Zokudluliswa Kwamabhizinisi eBasel - Zurich
Ukuhamba komuzi nokubuka indawo nge-Transfer Service Basel
06 Ephreli 0
I-Airport shuttle, Basel, sezindiza Shuttle, isevisi Limousine, amakhefu idolobha
Akukona nje amaklayenti ethu ebhizinisi - kodwa futhi nemindeni namaqembu kuze kube yi-7 abantu - sinikeza ithuba lokuhamba ukhululekile kwelinye lama-limousines ethu asezingeni eliphezulu. Ikakhulukazi ezinyangeni zasehlobo, iBasel idonsela abavakashi abaningi abafuna ukuthola imizi ezungezile eSwitzerland, eFrance naseJalimane. Ngenxa yendawo yethu enhle kakhulu singenza uhambo lwakho lomuzi lukhululekile ngangokunokwenzeka. Amakhasimende ethu amaningi ebhizinisi ajabulela ithuba lokuhlanganisa ibhizinisi ngobumfihlo futhi aqondiswe abaqondisi bethu abanokuhlangenwe nakho ekucindezelekeni kwebhizinisi nokuhlaselwa komphakathi
16 Mashi 0
I-Airport shuttle, Basel, Baselworld, Isevisi yokudlulisa
Njalo ngonyaka entwasahlobo, iBasel ihlala ngeviki ngezinkampani ezingaphezu kwe-1,800 ezethula amawashi abo kanye nokuhlobisa ngegama laseBaselword. Abahleli balesi sikweletu esibalulekile sokuhweba abazange bakhononde ngokubaluleka kwezivakashi. Abathengisi be-100,000 nabamele abathengisi bezilwane kulindeleke ukuba bahlanganyele kwi-World Fair ye-Watches and Jewellery. Ngomhla ka-Mashi 22, i-2018 amasango enhle azovulelwa izivakashi. Ngomshayeli wakho siqu ku-BASELWORD - I-Transfer Service Basel I-EuroAirport yaseBasel imaminithi ambalwa nje ukusuka embukisweni wokubukisa. Kodwa ngokuqinisekile - njengamanye amaningi
Basel, sezindiza Shuttle, isevisi Limousine
I-Airport shuttle, Baselworld, Ukudluliselwa kwezindiza, Ukudluliselwa kwezebhizinisi, Isevisi yokudlulisa
Yonke insimu yaseBasel isingatha izinkampani ezingaphezu kwe-1800 ezethula i-watch yazo nezindwangu zokugqoka eBaselword. Asikho isidingo sokukhononda mayelana nenani lezivakashi kulo mkhakha obalulekile wokuhweba kwezohwebo, ngoba njengonyaka wonke, i-2017 ilindeleke ukuba imele abathengisi be-100.000 nabamele abadayisi be-World Watch ne-Jewelery Show. Ku-22 March 2018 amasango enhle azovuleka ukugeleza kwezivakashi. Ukuhamba ngokuhamba phambili ku-BASELWORD - I-Transfer Service Basel I-EuroAirport Basel yethu imaminithi embalwa ngemoto evela esikhungweni sembukiso. Kodwa ngokuqinisekile ufuna - njengabanye abahamba ngebhizinisi - umbukiso womkhiqizi
09 Mashi 0
Sikunikeza isevisi ekhethekile kakhulu njengendwendwe yehhotela edolobheni lethu elihle laseBasel. Ngesevisi yonke-nxazonke ngenkathi uhlala eBasel, siqinisekisa ukuthi ungagxila ezintweni ezibalulekile - kungaba ukubuka eBasel's Old Town, ukuvakashela ku-Kunstmuseum noma umhlangano wakho webhizinisi. Isevisi yokudlulisa ngqo kusuka eSangweni Lasezindiza noma Ihhotela Sizokunakekela lapho ufika eBasel esikhumulweni sezindiza noma esiteshini sesitimela. Sikulindele ekugcineni kokufika futhi sikukhulule uhambo lwakho ngokukusiza ngemithwalo yakho eya emlilweni wethu. Ukusuka lapho sisekela
23 Januwari 0
Basel, sezindiza Shuttle, isevisi Limousine, Zuerich
Ukufika ngokuphepha nangokugcina isikhathi - nge-Premium Service Transfer Service Uhlose ukuhamba ebhizinisini noma injabulo ngokwakho futhi ungathanda ukuqinisekisa ukugeleza okubushelelezi nge-shuttle yezindiza ezinokwethenjelwa ngaphambi kokuhamba? Umshayeli wethu uzokuqoqa ngomunye wemikhiqizo yethu yasezingeni eliphezulu e-German esuka ekhaya, ehhovisi noma esangweni lesikhumulo sezindiza. Yebo sizokusiza ngomthwalo. Yiqiniso, kufanele indiza yakho ifike maduze, ngeke sikuvumele phansi kodwa ulinde ukufika kwakho. Fika ukhululeke futhi ukhululekile endaweni oya kuyo Abagibeli bethu abaningi basebenzisa ukuhanjiswa kwezindiza phakathi kweZurich Airport ne-Euro